Wadahadallo lagu dhex-dhexaadinayey beelo wada deggan deegaanno ka mid ah gobola Bari oo meel wanaagsan maraysa. – Radio Daljir
Wadahadallo lagu dhex-dhexaadinayey beelo wada deggan deegaanno ka mid ah gobola Bari oo meel wanaagsan maraysa.
Bossaso, June 29 – Dawladda Puntland ayaa dhawaan wafti u diray deegaanno ka tirsan gobolka Bari oo ay ka soo cusboonaatay colaad muddo soo jiitamaysay oo u dhexaysay beelo walaalo ah halkaasi wada deggan.
Waftiga ay dawladdu dirtay oo iskugu jiray golayaasha dawladda, maamulka gobolka Bari iyo salaadiin dhaqan ayaa cagta mariyey meelo badan oo ka mid ah dhulka la isku-maandhaafay iyagoo kulamo kala duwanna la qaaday waxgaradka labada beelood ee colaaddu u dhexaysay.
Waftigu, waxay labada dhinacaba ka dhaadhacsiiyeen in la joojiyo xabadda iyo xurguf-colaadeedka, loona guntado sidii loo gaari-lahaa nabadda, wada-noolaansho iyo is-afgarad buuxa oo leh mug iyo masataqbal dheer leh.
Mas’uuliyiinta ka socotay dawladda iyo odayaasha dhaqameedka u safray xallinta xurguftii Kob-dhaxaad ayaa socodkooda ku tagay deegaanno badan oo ay ka mid yihii n Ufayn iyo Igdhagays iyadoo walina ay ku hawlan yihiin arrimihii ay halkaasi u tageen.
Duqa magaalada Bossaso Maxamuud Faarax Beeldaaje oo ka mid ahaa waftigii dawladda ee deegaannadaasi tagay haddana ku sugan Bossaaso oo maanta u warramay idaacadda Daljir ayaa sheegay in ay wax-badan uga qabsoomeen socdaalkoodii ay ku tageen deegaannada ay wada deggan beelaha walaalaha ah ee ay mar kale colaaddu ka soo dhax-cusboonaatay.
Duqa, waxa uu sheegay falalka amni darro iyo midda hurinta colaadda in ay wadaan dad fara ku tirsan ah hase ahaatee badanka bulshada labada dhinacba ay diyaar u yihiin nabad iyo ku wada-noolaansho dhab ah.
Sikastaba ha ahaatee colaadda labadaasi qoys u dhexaysa ayaa ahayd mid in mudda ahba soo laa-laabanaysay ayna guuldarraysteen heshiisyo nabadeed dhawr ahaa oo labada dhinac isku af-garteen.